Suuqa Xayeysiinta Dijital Ah Ee Si Xawli Ah Ugu Soo Kordhaya | Martech Zone
Suuqa Xayeysiinta Dijitaalka ah ee Xawaaraha Sare Usocda
Axad, Agoosto 18, 2013 Isniin, Oktoobar 12, 2015 Douglas Karr
Waxaan kula kulanay shirkad aan faa'iido doon ahayn usbuucii hore xafiiskayaga kuwaas oo soo saaray waxyaabo aan caadi aheyn oo ku saabsan Facebook. Si kastaba ha noqotee, miisaaniyaddooda la ansixiyay waxay kaliya u leedahay waxyaabo xariijin television iyo radio xayaysiisyada sida miisaaniyaddooda guud ee suuq geynta. Tani waa arrin la xiriirta qaar badan oo aan macaash doon ahayn… agaasimayaashu xoogaa way dhib yar yihiin maaddaama ay miisaaniyadaha tooska ah ku saleeyaan deeqaha soo jiray tobanaan sano.
Maaha inaan nahay telefishanka iyo raadiyaha saxaarada (waxaan ku sameynaa qeyb qeyb radio), waa uun inay yihiin dhexdhexaadiyaal qaali ah oo u baahan in si habboon loo geeyo qayb ka mid ah isku-darka suuq-geynta guud. Warbaahinta dhijitaalka ah waxay bixisaa fursado qiimo jaban, waxsoosaar sare - gaar ahaan ururrada aan macaash doonka ahayn ee ay shaqaalaha iyo macaamiisha si xamaasad leh u qabaan. Warbaahinta tooska ah waxay ku siineysaa fursad aad ku huriso dabka, iyo taageerayaashaada iyo kuwa raacsan si ay u faafiyaan. Runtii kama duwana il dhaqan.
Marka qofka celceliska ah ay soo gaadho 3,000 oo farriimo xayeysiis ah maalintii, waxaad dooneysaa inaad hubiso in gaarigaaga xayeysiinta uu kuu geynayo bartilmaameedka aad rabto. Fududeynta Internetku wuxuu u abuuray irrid ballaadhan oo loogu talagalay macaamiisha u baahan alaabtaada ama adeeggaaga. Markaad isku dheelitirto qiimaha xayeysiinta internetka iyo faa'iidooyinkiisa, way fududahay in la arko sababta ay tani u ahayn suuq la iska indhatiro.
The sheeg kor iyo infographic hoose ka socota Kooxda La-talinta Is-dhexgalka waa aragti dhammaystiran oo ku saabsan koritaanka suuq-geynta dijitaalka ah muddo kadib marka loo eego warbaahinta soo jireenka ah.
Waqtiga Lagu Bixiyay Natiijooyinka Khibradda Isticmaalaha ee Iibka Sare
Aug 30, 2013 at 3: 40 AM
Hi Douglas, waad ku mahadsan tahay soo bandhigidda. Waxaan ku raacsanahay gaar ahaan in macaamiisha ay si aad ah ugu sii darayaan fiidiyowga dijitaalka ah nolol maalmeedkooda, in kastoo laga yaabo inaysan fadhiisanayn sofahooda si ay u dhammaystiraan baahidan. Inbadan waxay fiiriyaan fiidiyowyo kiniiniyada iyo aaladaha mobilada, meelkasta iyo meelkasta. Haddii sumadeena runti loogu talagalay in lala xiriiro macaamiishan, markaa caqli ayey u tahay suuqleyda inay bartaan oo ay bartaan xayeysiinta fiidiyowga dhijitaalka ah.
Aug 30, 2013 at 7: 16 AM
Dhibic weyn @jin_kaz: disqus! Runtii waan layaabay tirada shirkadaha sameeya xayeysiinta lacag bixinta laakin AAN ku darin xayeysiinta fiidiyowga taas.